Gbanwee na Highzọ Ahịa na Ahịa | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulGbanwee na Highzọ Ahịa Ahịa na Ahịa
07 / 11 / 2019 34 Istanbul, General, hyperlinks, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
mgbanwe n'okporo ụzọ na ọnụ ahịa akwa
Gbanwee na andzọ Ahịa Ahịa na Ahịa; Site na “ụdị ike ọnụahịa” nke Minista ofgbọ njem na akụrụngwa kwadebere ịgafe okporo ụzọ na àkwà mmiri, ụmụ amaala ga-eji ọnụ ụzọ ndị dị ọnụ ala karịa ụbọchị ụfọdụ na awa. Dika ike choro site na ịbawanye ma obu iwetulata ugwo a na-eme mgbanwe, ebe ihe a choro pere mpe, umu amaala na-enwe ike iji okwute na uzo di onu ala.
ụtụtụ 'Dabere na akụkọ banyere Tan Bariş Şimşek; Mmemme Kwa Afọ 2020 Onye Isi Ọchịchị webatara ụkpụrụ ọhụrụ banyere ụtụ na ịkwụ ụgwọ akwa. Na ụdị ọnụahịa ike dị iche iche eji eme ihe na Europe, a na-eji ntanetị pụrụ iche na-achọsi ike nke ndị ọrụ na ngwanrọ pụrụ iche maka oge 7 ụbọchị 24. Usoro ịnye ọnụahịa nwekwara ike ịdị iche dabere na ịdị ukwuu ma ọ bụ ụkọ ihe chọrọ site na softwares ndị a. Site na otu usoro nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu ji eme ihe, ebumnuche ya bụ ka ejiri ya dị ọnụ ala karịa oge ọrụ anaghị eme ka onye ọrụ ahụ funahụ ya.
EGO, NA-EME KA EGO
E tinyekwara mkpebi metụtara ọrụ a ga-arụ n'okporo ụzọ awara awara. Dika odi, ndozi na ndozi onodi uzo netiti uzo site na mmezi nke ndi onwe site na nkwekorita nke omuma di nkpa iji mezuo oru na usoro iwu.
Usoro echiche, mmemme na nhazi nke ụlọ ọrụ maka ihiwe ihe arụrụ ọrụ maka nchekwa okporo ụzọ ga-agwụ agwụ iji hụ na ejisiri nchekwa okporo ụzọ na usoro nke usoro nchebe. A ga-akwụsị ọrụ ndị tụfuru mkpa ha na ikike ha nwere.
Ụzọ Nkasi Obi Na-enweghị Mgbochi N'etiti Ụzọ Abụọ Ukwu
Okporo ụzọ na ụzọ okporo ụzọ
107 Million Pound Bridge na-efu Ụzọ E Si Nweta Ala
Ndị a bụ ọnụahịa niile na-abawanye! .. Newwayway Ot
Mgbanwe na mpaghara ụgbọ oloko na Antalya
Mgbanwe dị ukwuu n'okporo ụzọ nke Antalya, AC03 Bus Line
Mgbanwe nke TCDD Ọrụ Bipụta na Gazette Gazette
Na Usoro Nchekwa Mbupu Ọha na Obodo nke Kahramanmaraş…
Mmemme Kwa Afọ 2020 Onye isi ala
Akwa Onyinye Enyemaka
Gbanwee na Ahịa Ahịa
Networkzọ okporo ụzọ Turkey